Jiro tady an-kalamanjana, Jiro tadin'antoko - Zhongxin
Zava-baovaon'ny Party String Lights
Vaovao Patio String Lights
jiroindostria ho an'ny
13 taona traikefa
Zhongxin Lighting (HK) Co., Ltd. ary Huizhou Zhongxin Lighting Co., Ltd., naorina tamin'ny taona 2009, dia mpanamboatra matihanina & mpamatsy manokana amin'ny famolavolana, fampandrosoana, fanamboarana, fanodinana ary famatsiana vahaolana amin'ny hazavana mamirapiratra sy LED haingon-trano ivelany. jiro tady, jiro elo, jiro patio, jiro haingon-trano mandeha amin'ny herin'ny masoandro, labozia tsy misy lelafo ary vokatra mifandraika amin'ny zaridaina. Izy io dia mitazona ny fanamarinana fiarovana feno amin'ny vokatra jiro, ao anatin'izany ny UL, cUL, CE, GS, SAA sy ny sisa. Ny vokatray dia manaraka tanteraka sy mahafeno ny fepetra takian'ny fiarovana sy ny kalitaon'ireo firenena sy faritra alehany. Ny orinasanay koa dia mandalo ny fanaraha-maso ny andraikitra ara-tsosialy lehibe toy ny SMETA, BSCI, sns.
Ny fitaovana jiro ivelany dia mampitombo ny hatsaran'ny fanananao, ny hasarobidin'ny fanananao, ny fiarovana ary ny fiarovana, Miaraka amin'ny fitsanganan'ny efitrano ivelan'ny trano, ny jiro ivelany voafidy sy napetraka tsara dia ampahany manan-danja amin'ny endriky ny tranonao amin'ny ankapobeny sy ny vidiny. Fitaovana jiro ivelany amin'ny vidiny fihenam-bidy, fandefasana haingana ary serivisy mpanjifa lehibe avy amin'ny Zhongxin Lighting.
Ny consultant varotra matihanina dia hanome anao ny Q&A vokatra tsara indrindra.
Havaozinay tsy tapaka ny satan'ny baikonao ary hampiseho aminao ny sary avy amin'ny famokarana faobe.
Nanangana rafitra fanaraha-maso hentitra momba ny kalitao izahay mba hifehezana ny kalitaon'ny akora sy hahazoana antoka fa manana kalitao tsara ny vokatray.
OEM & ODM dia tonga soa, OEM marika misy.
Afaka manonta ny logo anao manokana amin'ny vokatra, afaka manamboatra ny fonosana boaty antsinjarany sy ny fomba famonosana hafa.
Serivisy ambony: 7 * 24 ora mialoha ny fivarotana.
Ny fihenam-bidy dia atolotra arakaraka ny habetsahan'ny kaomandy.
Manohana ny famolavolana ODM & OEM
Mihoatra ny 13 taona traikefa amin'ny indostria.
Hevitra sy naoty mpanjifa
Mpitantana QA ao amin'ny orinasako aho ary manana jiro tady roa ao an-tokotaniko mandritra ny taona vitsivitsy izao… mbola miasa tsara. Mbola manandrana manindrona ny jiro mananasy ihany koa aho mandritra ny herintaona, mandeha tsara ihany koa. Nahafinaritra ny fiaraha-miasa taminao sy Zhongxin nandritra ny taona maro ary ankasitrahako foana ny fanohanana avy amin'ny andaniny. Misaotra!
Salama Vera, Ny mpiasa rehetra ao amin'ny L4F dia maniry ny mirary taom-baovao sinoa ho anao sy ny ekipanao. Misaotra anao izahay noho ny asa mafy sy ny fanoloran-tenanao nandritra ny 12 volana farany, nahafinaritra ny fiarahana taminao. Manantena izahay fa hanana fiatoana mahafinaritra ianao sy ny fianakavianao ary mankafy ny fankalazana ny Taom-baovao. Misaotra.
Salama Sam, tena tonga soa ianao. Faly aho manampy anao sy ny ekipanao. Tiako ilay sary, mahafinaritra sy faly ny miara-miasa aminy. Mirary taona vaovao ho anareo rehetra. Miarahaba!
Mba hahazoana fampahalalana bebe kokoa sy hisafidianana ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny fampiharanao, azafady mifandraisa amin'ireo manam-pahaizanay.
Nahoana izy ireo no antsoina hoe labozia Tea Light?
Miaraka amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fiainan'ny olona, ​​asa tanana maro no...
Maharitra hafiriana ny jiro LED dite?
Efa nieritreritra ny hanana labozia tsy ho faty ve ianao? Manana y...
Ahoana no fiasan'ny jiro elo Patio?
Fantaro indray ny hakanton'ny zaridainanao rehefa latsaka ny alina. Ity Patio U...